Oromo Free Speech: Biyya Saudi Keessatti, Abbaan Duulaa Gammadaa Barattooti Oromoo Ajjeefamanii fi Oromoonni Mana Hidhaa Wayyaanee Jiran Hundi Yakkamtoota Jechuun ibsa Keene ilaachisee ,Qeerroon Bilisummaa Balaaleffate
Biyya Saudi Keessatti, Abbaan Duulaa Gammadaa Barattooti Oromoo Ajjeefamanii fi Oromoonni Mana Hidhaa Wayyaanee Jiran Hundi Yakkamtoota Jechuun ibsa Keene ilaachisee ,Qeerroon Bilisummaa Balaaleffate
Amajjii 6,2015 Ergamaan Wayyaane A/Duulaa Gammadaa (Minaaseen waldee Goorgiis) olola diinummaa butachuun hawwaasa Oromoo saawudi Arabia jiran dura dhaabbachuun yakki ajjeechaa fi hidhaa akkasumas saaminsa Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee EPRDF/TPLF fudhachaa jiruun tarkaanfii sirriidha jechuun yakka lammaffaa kan dhiifama hin qabne ilmaan Oromoo irratti dalagee jira.
Qeerroon, Dargaggootni Barattootni Oromoo olola Abbaan Duulaa (Minaaseen) ofaa jiru cimsinee kan balaaleffatu fi Abbaan Duulaa Gammadaa ofiin jedhu Yakka dugugginsa sanyii (genocide ) uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiruuf itti gaafatamaa ta’uu jabeessinee hubachiifna. Uummatni Oromoo Biyyoota ambaa garaagaraa keessa jiraatu ergamtoota Wayyaanee kam waliin iyyuu qunnamtii akka hin goonee fi Qondaalota Wayyaanee kanneen dura mormii guddaan akka dhaabatu fi FDG akka irratti kaachisuu waamicha dabarsina.
Yaa Uummata Oromoo hubadhaa ilaalaa diina keessan Warra Oromiyaa dabarsanii gurguran, warra uummata Oromoo ficisiisaa jiran,Qabeenyaa Oromoo saamsisaa jiran, warri Oromiyaa gurguraa jiran keessa tokkoo Abbaa Duulaa Gammadaa ta’uu Oromoon dagachuu hin qabu. Mee Oromoon Minaasee Gaaffii kana gaafadhaa Daa’imni gannaa 7 maal balleessetu rasaasaan reebamee ajjeefame?, manguddoon gannaa 8o badii maalii qabaaf rasaasaan reebamee ajjeeffame?? Qabeenyaan Oromiyaa maaliif samamaa? Barattootni Oromoo meeshaa maleeyyii irratti mootummaan wayyaanee waraana bobbasuun maaliif ajjeefamanii? Jumlaan hidhamanii? Barnoota irraa arii’atamanii? Gaaffii barattootni Oromoo gaafachaa jiraniif maaliif rasaasni deebii ta’ee? Gaaffiin barattoota gaaffii mirga Abbaa biyyummaa fi hiree Murteeffannati. Master plan Finfinnee warraa qopheesse keessa tokko Abbaa Duulaa Gammadaa (Minaasee) ta’uun ifatti saaxilamee jira.